उत्तम स्रोतहरू तपाईंको कर्पोरेट ब्लगि Strate रणनीतिहरू Martech Zone
मंगलवार, मार्च 13, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
सँग कुरा गर्न तयारीमा SharpMinds कर्पोरेट ब्लगि aboutको बारेमा समूह, मैले धेरै साइटहरूबाट केही स्रोतहरू सँगै लिएँ। मैले सार्वजनिक रूपमा उनीहरूलाई धन्यवाद नदिएमा म बेवास्ता गर्नेछु। साथै, म व्यक्तिहरूलाई संसाधनको साथ ह्यान्डआउट प्रदान गर्दै छु र यी मानिसहरूका वेबसाइटहरूमा लिंकहरू।
तपाईंलाई सत्य कुरा भन्नुको लागि, विगतमा म एउटा रणनीतिको रूपमा कर्पोरेट ब्लगिंगको बिरूद्ध थिएँ। वास्तवमा मैले यो शब्द लेखेको थिएँ भरपाई किनभने यो प्रायः के हुन्छ जब तपाईं रणनीतिक हुन वा ब्लगमा नाप्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। यो तपाईं मा backfires। मैले राम्रो कर्पोरेट ब्लगि ofको धेरै उत्कृष्ट उदाहरणहरू देखेको छु यसको बिरूद्धमा हुन। कम्पनीहरूले वास्तवमै गल्ती गरिरहेछन् यदि तिनीहरूले उनीहरूको समग्र सञ्चार योजनामा ​​यस प्रविधि प्रयोग गरेनन्।
किन कर्पोरेट ब्लगिंग उपस्थिति छ?
हालसालै मैले धेरै कम्पनीहरूलाई याद गर्न सुरू गरें कि उनीहरूले कम्तिमा ब्लगि theirले उनीहरूका कम्पनीहरू र उनीहरूका ग्राहकहरू प्रदान गर्दछ भन्ने कुराको कदर गर्दछन्:
कम्पनी र तिनीहरूको कर्मचारीहरु लाई तिनीहरूको उद्योग मा सोच्ने नेताहरु को रूपमा प्रदान गर्दछ।
कम्पनीको दृश्यता सुधार गर्दछ। वास्तवमा, केहि तथ्या according्कका अनुसार कम्पनी वेबसाइटहरूमा गएका visits visits% ले ब्लगको माध्यमबाट यसलाई बनाउँदछ।
तपाइँको कम्पनी को एक मानव अनुहार को साथ तपाइँको कर्मचारीहरु, ग्राहकहरु, र संभावनाहरु प्रदान गर्दछ।
यो तपाईंको कम्पनी सुधार गर्न ब्लगोस्फीयर र खोज इन्जिन प्रविधि प्रयोग गर्दछ फेला पार्न सकिने इन्टरनेटमा।
तपाइँ कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ:
सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न, नेटमा केहि राम्रो सल्लाह छ। यहाँ केहि उदाहरणहरू छन्:
एक ब्लग कमेटीलाई सँगै राख्ने बारे सोच्नुहोस् जुन ब्लगको निरीक्षण गर्दछ, सामग्री, सहभागिता धक्का, र कम्पनी को लागी ब्लगहरु लाई अनुमोदन।
तपाईंको ब्लगरहरूलाई ब्लगहरू पढ्न प्रोत्साहित गर्नुहोस् र ब्लगहरूबाट उनीहरूको सल्लाह लिन। मार्केटिंग र प्रेस विज्ञप्ति श्रोतहरू अव्यवसायिकको रूपमा हेर्छन् र ब्लगर्सले यसलाई हेरेका हुन्छन् - प्राय: स्पिन, कपट र पूर्व-अनुमोदित सामग्रीको कारण।
तपाईको ब्लगको लागि केन्द्रित शीर्षक परिभाषित गर्नुहोस्, यो उद्देश्य हो, र तपाईको अन्तिम दर्शन। यी तपाईंको ब्लगमा प्रभावी ढicate्गले संचार गर्नुहोस् र तपाईंको सफलता कसरी मापन गर्ने भनेर फिगर गर्नुहोस्।
तपाईंको पोष्टहरू मानवीय बनाउनुहोस् र कथा बताउनुहोस्। तपाईंको पोष्टको सन्देशमा व्यक्तिलाई सिकाउन कहानी कथन सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका हो। महान कहानीकारहरू जहिले पनि विजय हुन्छन्।
भाग लिनुहोस् र तपाइँको पाठकहरु मा सामेल हुनुहोस्। तपाईंको विषयहरूमा उनीहरूलाई प्रभाव र प्रतिक्रिया दिनुहोस् र उनीहरूलाई ठूलो सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुहोस्। अन्य ब्लगहरूमा भाग लिनुहोस् र तिनीहरूलाई लिंक गर्नुहोस्। यो 'प्रभावको क्षेत्र' हो जुन तपाईंसँग जडान हुनुपर्दछ।
विश्वास, अधिकार र तपाईंको व्यक्तिगत ब्रान्ड निर्माण गर्नुहोस्। चाँडो र प्रभावकारी रूपमा जवाफ दिनुहोस्। जब तपाईं भरोसा निर्माण गर्नुहुन्छ, त्यस्तै तपाईंको कम्पनी पनि हुनेछ।
गति निर्माण गर्नुहोस्। ब्लगहरू पोष्टको बारेमा होइनन्, तिनीहरू पोष्टहरूका श्रृ about्खलाको बारेमा हुन्छन्। सब भन्दा बलियो ब्लगहरु नियमित रूप मा महत्वपूर्ण सामग्री धक्का द्वारा प्रतिष्ठा र क्रेडिट निर्माण।
यहाँ3अक्ष को लागी मेरो दृष्टिकोण छ एक महान ब्लगिंग रणनीति शामिल, ब्लगि Tri त्रिकोण:
एउटा ट्र्याकब्याकले पोस्टमा टिप्पणी गर्‍यो कि समग्र रणनीति हराएको थिएन। जब हामी कुरा गर्छौं कर्पोरेट ब्लगिंग रणनीतिहरु, म विश्वास गर्दछु कि डिजाइन एकदम महत्त्वपूर्ण छ - तर मार्केटिंगद्वारा पूर्वनिर्धारित। म आशा गर्दछु कि निगमको ब्लगि intoमा डाइभ गर्नु अघि उत्तम वेब डिजाइन र उपस्थिति छ। यदि होईन भने, तिनीहरू यसलाई सूचीमा उत्तम जोड्छन्!
त्यहाँ के जोखिमहरू छन्?
हालसालै नभएको पुस्तक क्लब बैठकमा हामीले हाम्रा एक उपस्थित, एक वकीललाई सोध्यौं, कर्मचारीहरू ब्लग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी मान्यता के हो। उनले भने कि यो वास्तवमै उस्तै जोखिममा छ कि त्यो कर्मचारी अरु कहिँ पनि बोल्दै छ। वास्तवमा, प्रायः कर्मचारीको पुस्तिकाले ती कर्मचारीहरूको कार्यहरूको अपेक्षाहरू समाहित गर्दछ। यदि तपाईंसँग एक कर्मचारी पुस्तिका छैन जुन तपाईंको कर्मचारीहरूको अपेक्षित व्यवहारलाई कभर गर्दछ भने, हुनसक्छ तपाईंले गर्नु पर्छ! (ब्लगिंगको पर्वाह नगरी)।
यहाँ मा एक शानदार सन्दर्भ छ कानुनी दृष्टिकोणबाट ब्लग गर्ने काम नगर्नुहोस्.
छलफल गर्न केहि अतिरिक्त वस्तुहरू:
तपाईं कसरी आलोचना, नकारात्मक मुठभेड, र टिप्पणीको साथ व्यवहार गर्नुहुन्छ? तपाईको अपेक्षाहरू सेट अप गर्न सुझाव दिइन्छ कसरी तपाईको ब्ल्गमा टिप्पणीहरू मध्यस्थता र स्वीकार गरिन्छ। म कुनै पनि कर्पोरेट ब्लग को लागी एक टिप्पणी नीति प्रोत्साहित गर्छु।
तपाइँ कसरी ब्रान्ड नियन्त्रण सुनिश्चित गर्नुहुन्छ? तपाईंलाई आफ्ना ब्लगरहरूलाई नारा, लोगो वा तपाईंको ब्रान्डको आवाजको साथ गडबडीको आवश्यकता पर्दैन। यसलाई हात बन्द गर्नुहोस्।
उत्पादक नभएको आफ्ना ब्लगरहरूसँग तपाईं कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ? तपाईंको ब्लगर्सले हात अघि नीति स्वीकार्नुहोस् जहाँ सहभागिता मात्र अनिवार्य हुँदैन, तर पछाडि झर्दा तिनीहरूको सम्भाव्यता खर्च हुन्छ। उनीहरूलाई बुट दिनुहोस्! शीर्षकहरूको लगातार आउटपुट कायम गर्न कुनै पनि ब्लगि strategy रणनीतिको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ।
तपाईं कसरी बौद्धिक सम्पत्तिको प्रदर्शनीको साथ काम गर्नुहुन्छ जुन कम्पनीको व्यवसायको मुख्य छ?
शिर्षकमा पढ्नका लागि पुस्तकहरू:
डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि। - म द्वारा लिखित!
कर्पोरेट ब्लगि Book पुस्तक: बिल्कुलै सबै कुरा तपाईलाई थाहा पाउनु आवश्यक छ यो सहि पाउनको लागि।
डिजिटल आदिवासी: अब व्यवसायको दिशा: सहज, घुमन्ते र कहिल्यै परिवर्तन हुने।
नग्न कुराकानीहरू: कसरी ब्लगहरू बजारमा परिवर्तन गर्दै ग्राहकहरूसँग कुराकानी गर्ने।
कर्पोरेट ब्लगिंग सल्लाह र संसाधन
सबै जानकारीहरू जुन मैले यस पोष्टमा सँगै राखेको थिएँ माथिको धेरै लिंकहरू मध्ये एकबाट तल वा यो सूचीमा प्रेरित भएको थियो। यहाँ वर्णन गर्न को लागी धेरै पोष्टहरू थिए। मैले सकेजति जानकारी जम्मा गरे र यसलाई एकल पोष्टमा सँगै राख्न खोजें जुन कर्पोरेट ब्लगि strate रणनीतिहरूमा धेरै विज्ञहरूको दृष्टिकोणको एक उत्कृष्ट सिंहावलोकन प्रदान गर्दछ। म आशा गर्दछु कि यी ब्लगहरूका मालिकहरूले यसको कदर गर्दछन् - तिनीहरू यो पोष्टका लागि सबै क्रेडिट योग्य छन्!
म यी ब्लगहरूको प्रत्येकमा समय खर्च गर्न जो कोहीलाई पनि उत्साहित गर्दछु। तिनीहरू अविश्वसनीय स्रोतहरू हुन्!
कसरी ब्लग सुरू गर्ने
उत्तरपूर्वी विश्वविद्यालयले सफलतापूर्वक अध्ययन ब्लग गर्दै
दिवा मार्केटिंग ब्लग
कर्पोरेट ब्लगिंग उदाहरणहरू
केहि प्रदान नगरी यो पोष्ट पूर्ण हुँदैन कर्पोरेट ब्लगि लिंकहरू। केही छन् सरकारी कर्पोरेट ब्लगहरू तर मलाई लाग्छ यो हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ अनौपचारिक कर्पोरेट ब्लगहरू पनि। यसले केहि प्रमाण प्रदान गर्दछ कि यदि तपाइँ तपाइँको कम्पनी वा ब्रान्डको बारेमा ब्लग नगर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, अरु कोहीले!
माइक्रोसफ्ट डेवलपर नेटवर्क ब्लगहरू
आधिकारिक गुगल ब्लग
म्याट कट्स: ग्याजेटहरू, गुगल र एसईओ
अनौपचारिक सपना होस्ट ब्लग
जहाँ म बस्छु
याहू खोज ब्लग
कर्पोरेट ब्लगिंग खोज अनुकूलन
व्यवसायहरू र उपभोक्ताहरूले सामग्रीको उपभोगको माध्यमबाट तिनीहरूको अर्को अनलाइन खरीदको खोजी गरिरहेका छन् र कर्पोरेट ब्लगहरूले सामग्री प्रदान गर्दछ। त्योले भन्यो, त्यहाँ चरणहरू छन् जुन तपाईले दुबै प्लेटफर्मलाई अनुकूलित गर्नुपर्दछ (सामान्यतया वर्डप्रेस) साथै तपाईंको सामग्री। जब तपाईं Google मा रातो कार्पेट रोल आउट, तिनीहरूले तपाईंको सामग्री अनुक्रमणिका र तपाईंको सामग्रीको पहुँच काफी विस्तार। ब्रायन्ट टटरोले तपाईंको ब्लगलाई अप्टिमाइज गर्न एउटा श्रृंखला लेखेको छ - यस मार्फत पढेर निश्चित गर्नुहोस् DK New Media यदि तपाईंलाई सहयोग चाहिन्छ भने।
कृपया टिप्पणी गर्न र तपाईंको आफ्नै मनपर्ने कर्पोरेट ब्लगिंग लिंकहरू थप्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्!
टैग: ब्लगिंगब्लगिंग गाईडहरूब्लगिंग संसाधनहरूकर्पोरेट ब्लगिकर्पोरेट ब्लगिंग उदाहरणहरुdummites को लागी कर्पोरेट ब्लगिंगकर्पोरेट ब्लगि gu गाईडहरूकर्पोरेट ब्लगिंग रणनीतिहरु
मार्क्स 13, 2007 मा 9: 46 PM
ब्लगिंग सफलता को अध्ययन को संदर्भ को लागी धन्यवाद। अध्ययनका दुई अग्रणी लेखकहरू मध्ये एकका रूपमा, यो हाम्रो ब्लगि success सफलताको बारेमा सुझावहरूको साथ समुदायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य थियो।
मार्क्स 13, 2007 मा 10: 15 PM
यो एक राम्रो अध्ययन हो। मैले यसमार्फत स्किम गरें तर यसमा गहिरो गहिरो खन्नु पर्दैन। तपाईंले यो प्रदान गरेर एक महान सेवा गर्नुभयो! राम्रो काम!
मार्स 14, 2007 मा 1: 57 एएम
एक ब्लग कमेटी सँगै राख्ने बारे सोच्नुहोस् जुन […] कम्पनीको लागि ब्लगहरूलाई अनुमोदन गर्दछ।
त्यसोभए मूलत: कर्पोरेट ब्लग मार्केटिंग कुराकानीको दैनिक / साप्ताहिक संग्रह हुनेछ? तपाईं आफैले भन्नुभएको छः
मार्केटिंग र प्रेस विज्ञप्ति संसाधनहरू […] लाई तल हेरेका छन् […] किनकि […] पूर्व-अनुमोदित सामग्रीको कारण।
मलाई लाग्छ जबसम्म तपाईं खुला हुन तयार हुनुहुन्न र केवल नकारात्मक टिप्पणीहरू मेटाउँनुहुन्न, कम्पनीले तपाईंको पुरानो वेब रणनीतिमा टाँसिनेछ। जसरी खोजीको स्तर सुधार गर्ने रणनीतिलाई त्यस्तै उदासिनेछ।
मार्स 14, 2007 मा 2: 06 एएम
दोस्रो पढ्दा मेरो अन्तिम टिप्पणी एकदम नकरात्मक देखिन्थ्यो। त्यो अभिप्राय थिएन। तपाईले लेख्नु भएको उत्तम पोष्ट, डगलस।
मैले भर्खर इशारा गर्दै थिएँ कि कम्पनीले ब्लगलाई अरू बजारका साधनहरू भन्दा बढी देख्नु पर्छ। यो ग्राहकको लागि सीधा च्यानल हो, तर मात्र यदि a) खुल्लमखुल्ला र ख) दुई-तरिका सञ्चार उपकरणको रूपमा प्रयोग गरीन्छ।
मार्स 14, 2007 मा 6: 44 एएम
मार्टिन, मैले यसलाई नकारात्मक बनाइनँ। म तपाईंसँग सहमत छु ... मलाई लाग्दैन कि ब्लग समितिले सामग्रीको प्रत्येक अंशलाई अनुमोदन गर्नुपर्दछ - तर मलाई लाग्छ कि समितिले ब्लगहरू सामग्रीमा रहेको, टिप्स र प्रतिक्रिया प्रदान गर्दै, र गति कायम राख्न सुनिश्चित गर्न समय लिनु पर्दछ।
म सहमत छु - यदि ब्लग समितिले समीक्षा, सम्पादन र समाग्री समीक्षा गरिरहेको छ भने - ब्लगले राति नै यसको विश्वसनीयता र पाठकत्व गुमाउनेछ। म मेरो व्याख्यानमा स्पष्ट गर्न निश्चित छु।
म पनि सहमत छु ... यदि तपाइँ लगातार आफ्नो मार्केटिंग र पीआर स्पिन तपाइँको ब्लगिंग रणनीति को एक भाग को रूप मा अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ, तपाइँ मात्र एक वेबसाइट कायम राख्न सक्नुहुन्छ!
मार्क्स 14, 2007 मा 8: 18 PM
डग - महान पोष्ट! म अहिले कर्पोरेट ब्लगको विकासमा काम गर्दै छु र यस पोष्टमा प्रयोग गर्न धेरै स्रोतहरू फेला पारेको छु। राम्रो काम - धन्यबाद!
मार्क्स 14, 2007 मा 8: 25 PM
धेरै धेरै धन्यवाद, पैट्रिक! मसँग एउटा ... छ डाउनलोड साथै, यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने। मैले भर्खरै यो रात राखें (एक स्ट्याक प्रिन्ट पछि) किन्कोस भुलिको लागि)
जुन 11, 2007 मा 11: 11 PM
म हार्ड प्रतिलिपि प्राप्त गर्न को बारे मा उत्सुक थिए वा केहि म त्यो अध्ययन को लागी छाप्न सक्छ। मेरो लागि रोचक यो ग्राहकहरु संग ल्याउन।
मलाई लाग्छ मेरो एक ठूलो ग्राहकले "क्लग" निर्माण गर्न सक्छ
डिसेम्बर १, २०१ 13 2007:२:10 अपराह्न
यो उत्तम हुनेछ यदि केही कर्पोरेट ब्लग उदाहरण गैर-टेकनी कम्पनीहरूबाट हुन्।
डिसे 14, 2007 मा 2: 54 AM
त्यो राम्रो प्रतिक्रिया हो, yiu! मलाई वास्तवमै केहि थप उदाहरणहरू तान्नु आवश्यक छ। मलाई लाग्छ कि ट्राभल एजेन्सीमा एक टन छ।
अगस्ट 6, 2015 मा 10: 57 AM
रणनीतिको रूपमा कर्पोरेट ब्लगिaएक उत्तम विचार हो rme ..
व्यवसायलाई बढावा दिनको लागि सोशल मिडिया प्रयोग गर्नुको सट्टा, हामीले एउटा ब्लगको निर्माण सुरु गर्नुपर्नेछ जसमा लेखहरू लेख्न जस्ता धेरै चीजहरू समावेश हुन्छन् जसमा सार्वजनिक वा सम्भावित ग्राहकको ध्यानाकर्षण हुन्छ, हेडलाइटहरूको सही छनोट हुन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको एउटा मूल्यवान लेख सामग्री प्रदान गर्दछ। पाठकहरु
यो मार्केट मा लामो समय र रहन को लागी मद्दत गर्दछ र तपाइँको व्यापार लाई बढावा दिन
स्काईटेक - मलेशियाबाट ब्लगर